ဖြုတ်​မ​ရ​တဲ့ avira antivirus software ​ကို ​ဘယ်​လို​ဖြုတ်​ရ​မ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဖြုတ်​မ​ရ​တဲ့ avira antivirus software ​ကို ​ဘယ်​လို​ဖြုတ်​ရ​မ​လဲ
hanhtutaung27: ​အ​ကို..​တစ်​ခု​လောက် ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး​နော avira ​ဖြုတ်​လို့​မ​ရ​ဘူး ​ဖြစ်​နေ​လို့. ​ဘယ်​လို​မျိုး ​ဖြုတ်​ရ ​မ​လဲ ​ပြော​ပေး​ပါ .
​ကို​ဟန်​ထွဋ်​အောင်​ရေ ​အ​ခု​တင်​ပေး​လိုက်​တဲ့ avira removel tool ​နဲ့ ​ဖြုတ်​လိုက်​ပါ. ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ ​အဲ့​လို​မျိုး​ပဲ ​ဖြုတ်​မ​ရ​တဲ့ ​အ​ခါ​တွေ​မှာ removal tool ​တွေ​နဲ့ ​ဖြုတ်​မှ ​ပြုတ်​တာ​မျိုး​တွေ ​ရှိ​ပါ​တယ်. ​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်.
Download mirrorcreator | ifile | mediafire | zshare | ziddu | megaupload
window7version ​အ​နိမ့်​က​နေ ​အ​မြင့်​ကို ​ဘယ်​...
​ဖြုတ်​မ​ရ​တဲ့ avira antivirus software ​ကို ​ဘယ်​...